Na-ejikarị Oge A Na-enwetụbeghị ụdị Ya Resghaghachi Otu Anyị Si Arụ Ọrụ | Martech Zone
Mgbanwe dị ukwuu agbanweela n'ụzọ anyị si arụ ọrụ na ọnwa ndị na - adịbeghị anya nke na ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ha agaghị achọpụta ozugbo ụdị ụdị ọhụụ dị iche iche na-enwete ugbua tupu ọrịa zuru ụwa ọnụ etiwapụ. Dị ka ndị na-ere ahịa, teknụzụ ebe ọrụ na-aga n'ihu na-eme ka anyị bịarukwuo nso dịka otu ka anyị wee nwee ike ijere ndị ahịa anyị ozi n'oge nsogbu ndị a, ọbụlagodi mgbe anyị na-agabiga ihe ịma aka na ndụ anyị.
Ọ dị mkpa ka ịkwụwa aka ọtọ na ndị ahịa, yana ndị otu, gbasara ọnọdụ. Anyị anaghị arụ ọrụ ụlọ ugbu a, anyị na-arụ ọrụ n'ụlọ n'oge ọrịa na-efe efe. Ọ bụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ sistemụ ahụ. Iji teknụzụ eme ka njikọ anyị na ndị ahịa na ndị ọrụ anyị bụrụ isi ihe dị mkpa na nzaghachi anyị n'oge a a na-enwetụbeghị ụdị ya.
Zaghachi ịgbanwe site na ibute ndị mmadụ ụzọ
Kedu ka ndị ahịa ahịa kwesịrị isi zaghachi? Na Teknụzụ kọmputa, anyị na-ahazi ihe karịrị ijeri ijeri azụmahịa 10 kwa ọnwa. O doro anya na ndị mmadụ na-eri ọdịnaya na apụ-awa na ọdịdị niile nke otu esi arụ ọrụ na-agbanwe.
Na oghere B2B ọdịnala, anyị ga-emegharị ma lelee anya ka anyị si ekwukọrịta, na-achọpụta na ndị ahịa nwere ezinụlọ na mkpa ndị ọzọ chọrọ. Echiche nke 9 ka 5 na-aghọwanye ihe mgbe ochie, nke ahụ pụtara na anyị agaghị ahọrọ mgbe anyị na-ege ndị ahịa ntị. Anyị ga na-akpọ oku na mpụga ot oge windo.
Iji kacha mma na-ejere ndị ahịa anyị, ọ dị mkpa icheta itinye ndị ọrụ mbụ, na-ejide n'aka na ha nwere akụ ha chọrọ iji nwee ọganiihu. Nke ahụ dị mkpa ugbu a karịa na anyị niile na-arụ ọrụ n'ụlọ na-eme ihe dị iche na ọnọdụ na ọnọdụ ọrụ.
Dị ka azụmahịa, anyị kwesịrị isetịpụ ihe mgbaru ọsọ doro anya nke dị n'etiti ndị ahịa na ịbawanye njikọ ndị ahịa ma na-echekwa ọdịmma nke ndị ọrụ anyị n'uche site na nduzi na-akwado.
Zute Mkpa Ndị Ahịa Site na Nchọpụta, Agility, na Sensiti
Ọrịa ahụ na-efe efe na-arịwanye elu iji zute mkpa ndị ahịa ọhụrụ na nsogbu ahụ. Anyị na-eji nlezianya na-azaghachi ka anyị wee nwee ike ịghọta otu esi emetụta ndị ahịa ọ bụla. Anyị nọ n’ebe pụrụ iche n’ihi na ndị mmadụ chọrọ ịgwa anyị okwu. Ndị ụlọ ọrụ na-agabiga ụda na mgbada, ma na-enyocha ngwa ngwa ha. Onye isi oche anyị ejiriwo oge nọrọ ndị ahịa, anyị na-arịkwa elu iji gboo mkpa ha.
Anyị achọpụtala na ụfọdụ ụlọ ọrụ na-aka ike karịa ndị ọzọ na nsogbu. Ya mere, kama ịmụta a blanket obibia ahịa, anyị kwesịrị ịbụ ihe ọzọ ịmata na ihe ziri ezi karịa mgbe ọ bụla anyị ozi. Ọ dị mkpa na anyị ga-eji ozi ọhụụ niile anyị na-abata iji mata ohere, ma nyefee ọgaranya karị, ahụmịhe ịchụso ezubere iche. Anyị kwesịrị ịnweta data bara ụba n'aka ndị ahịa anyị ka ha wee nwee ike ịzaghachi ndị ahịa ahịa n'ụzọ kachasị mma. Anyị na-ebute ozi ebumnuche ụzọ, nke na-abịakwute anyị site na DemandBase, yabụ anyị nwere ike iru dashbod bara ọgaranya ma nye ndị ọrụ ike ịzaghachi ndị ahịa n'ụzọ bara uru.
Ọ dị oke mkpa ịtụle otu ị ga - esi nyere ndị ahịa aka ịnyagharịa nsogbu a nyere mgbanwe mgbanwe siri ike ha na - eche. Informatica nyere ndị ahịa nke ndị ahịa ohere ịnweta ngwaahịa n'oge a, nke mere na ha nwere ọtụtụ ịnyịnya na obere ihe mgbochi na ihe okike ha.
Ndị mmadụ na-atụ ụtụ isi n'ụzọ mmetụta uche ugbu a. Site n’ichebara oge anyị bi na ya echiche, anyị nwere ike webata oge ọhụụ nke ịmata ihe na ihe okike, na-egosi ndị ahịa na anyị dị gara gara ma nwee ike ime mgbanwe ma na-atọkwa ha ụtọ.
Njikota Teknụzụ Nwelite Nrụpụta
N'ihe ịma aka ohuru na efere onye ọ bụla, ọ dị mkpa ịme ihe ziri ezi n'etiti ịbụ ihe ọhụụ na inyere ndị gị aka ilekwasị anya na ọrụ kwesịrị ekwesị. Nke a dị mkpa ugbu a ugbu a na anyị niile nọpụrụ iche ma na-arụ ọrụ na gburugburu ebe dị iche iche. Dika ndi ahia ahia, ilekwasi anya na oru di nma na eme ka otutu ihe anyi na abawanye, o na enye anyi ezigbo ego na ntinye ego, ma n’enyere anyi aka iru ndi ezi ahia.
Nke a bụ ebe anyị hụrụ teknụzụ njikwa ọrụ abata na nke ya. Anyị mejuputara Ebe ihu ọrụ na ngalaba ahia anyi ma mekwaa usoro oru anyi niile n’ime sistemu. Otu ikpo okwu a na - enyere onye ọ bụla nọ n’otu ìgwè na ebe dị iche iche ohere ịkekọrịta ozi, lelee ọganiru megide ihe aga-eme, mepụta ọdịnaya ọnụ, kekọrịta echiche, ma jikwaa usoro dị mgbagwoju anya
Ọ na-enyere ndị anyị aka ịhụ ka ọrụ ha si kwekọọ na nke ndị otu ndị ọzọ - yana ebumnuche azụmaahịa anyị niile. Ọ na - achota na ihe ọhụụ nabatara usoro anyị na ihe dị mkpa. Ọ na-etinye ọrụ onye ọ bụla n'ime ihe gbara ọkpụrụkpụ, n'ihi na ha nwere ike ịhụ ihe ndị otu ndị ọzọ na-eme, yana otu ọrụ ha si daba na ọrụ ọ bụla.
Maka anyị, ịnwe otu nhazi njikwa ọrụ nke na-ejikọ ọrụ anyị niile na-arụpụta nghọta ka mma, ọhụụ ka mma, mkpebi ka mma, na nsonaazụ azụmaahịa ka mma. Teknụzụ a na-enyere anyị aka ịrụ ọrụ nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma - hụ na onye ọ bụla nwere ike ilekwasị anya na-arụpụta ọrụ, kama ịnọ na-arụsi ọrụ ike.
Mmetụta Ọdịnihu nke Ọrụ
Ọ bụrụ na nsogbu ugbu a akụzierela anyị ihe ọ bụla, ọ bụ na anyị kwesịrị ibute mkpa nke ndị mmadụ ụzọ karịa ihe niile. Echere m na nke ahụ ga-abụ isi ihe ga-eme n'ọdịnihu nke ọrụ. Ekwenyere m na nke ahụ bụ ikpe tupu ọrịa a etiwapụ, mana mgbanwe ndị etinyere na ndụ anyị etinyela uche onye ọ bụla n'uche nke ọma na mkpa ndị mmadụ n'otu n'otu.
Maka m, ebe ọrụ na-aga nke ọma n’ọdịniihu ga-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịrụ ọrụ n’ụzọ nke ha. Ndụmọdụ m nye ndị ndu azụmaahịa bụ ịchọpụta ihe na-enyere ndị mmadụ aka ịrụ ọrụ ha kacha mma, na ihe na-egbochi ha. Jirizie teknụzụ ziri ezi mee ka ndị mmadụ nwee ike ịgbanwe ihe okike ha ma tinye ikike ha na nsonaazụ kacha mma, na-enweghị mgbagha ma ọ bụ nsogbu metụtara IT. Ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ike iweta ihe kachasị mma nke ha n'ọrụ kwa ụbọchị, nrụpụta ọrụ, ihe ọhụrụ na - n'ikpeazụ - ịkwado ndị ahịa, ga-arị elu.
Ahụmahụ nke ịrụ ọrụ n'oge ọrịa na-efe efe amalitela afọ nke inwe mmetụta dị elu mgbe ya na ndị ọrụ ibe ya na-emekọ ihe. Ọdịmma na-egosipụta dị ka isiokwu na mbido mkparịta ụka ọ bụla. Enwere ike iji mgbanwe a n'ime uche dị ka ihe mkpalite maka mgbanwe n'ọdịnihu nke ọrụ.
Ndị ụlọ ọrụ ga-achọ itinye ego na mmemme ahụike na ahụike dị mma iji dọta ma jigide ndị kachasị mma. Na inyere ndị ha aka ịhazi usoro ọrụ ndụ dị mma. Teknụzụ ga - enwe ọrụ dị mkpa ọ ga - arụ. Ngwakọta njikwa njikwa ọrụ ga-adị oke mkpa n'ime ka ndị mmadụ jikọọ, na-eme ka ihe ọhụrụ dị ọhụrụ, ma na-elekwasị anya na-atọ ndị ahịa ụtọ n'etiti ndị na-anaghịzi arụ otu ọrụ ma ọ bụ usoro ọrụ.
N’ụzọ dị oke mkpa, site na ịhọrọ teknụzụ na-akwado nkwado yana site na ịghọta mkpa nke ndị anyị, anyị nwere ike ijide n’aka na echefughi obiọma na nchebara echiche anyị gosipụtara n’oge nsogbu a na-enweghị atụ. Ndị mmeri ga-abụ ọ bụghị naanị ndị ọrụ anyị, kamakwa ụlọ ọrụ anyị na ndị ahịa anyị na-ejere ozi.
Tags: b2bahụmahụ ahịaọdịnihu ọrụkedu ka anyị si arụ ọrụinformaticsọrụ dịpụrụ adịpụihe mgbaru ọsọ ire ereTechnology